Blackmagic ဒီဇိုင်းသည်နယူးယောက်ရှိ NAB Show တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Switcher ပါလိမ့်မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Blackmagic ဒီဇိုင်း NAB Show ကို New York မြို့မှာအသစ်လွင်ဆုံး Switcher ကိုအထူးပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်
Blackmagic ဒီဇိုင်း NAB Show ကို New York မြို့မှာအသစ်လွင်ဆုံး Switcher ကိုအထူးပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်
ထောင့်လှည့်ပတ်အောက်တိုဘာလညာဘက်နှင့်အတူ, Show ကိုနယူးယောက် NAB မတက်ရောက်နည်းပညာနှင့်မီဒီယာပညာရှင်များများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းထုတ်ကုန်များ၊ အရောင်ပြင်ဆင်သူများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာများ၊ ဗွီဒီယိုပြောင်းစက်များ၊ ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ခလုတ်များ၊ disk အသံဖမ်းစက်များ၊ router များ၊ နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ။ လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာသူတို့မှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် switcher ပါလိမ့်မယ် ATEM နက္ခတ် 8K at NAB ပြရန် နယူးယောက်။
အဆိုပါ ATEM နက္ခတ် 8K တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် က Ultra HD ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်4M / Es နှင့်အတူအသက်ရှင် 40 12G-SDI သွင်းအားစု x, 24 12G-SDI aux လက်ငင်း,4DVEs, 16 Keyers,4မီဒီယာပလေယာ,4မြင်ကွင်းစုံ,2SuperSource သည် SDI input ကိုအပေါ်စံချိန်စံညွှန်းများပြောင်းလဲခြင်း x ။ 8K ပြန် switched သည့်အခါဤအင်္ဂါရပ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးဟာအလွန်အစွမ်းထက် 8K ခလုတ်များ၏စစ်ဆင်ရေးထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ ATEM နက္ခတ် 8K ပင် built-in ဖြစ်ပါတယ် TalkBack နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 156 ရုပ်သံလိုင်း Fairlight အသံရောနှော EQ နှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအပြည့်အဝ Fairlight အသံ console ကိုချိတ်ဆက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုနိုင်သည့်ဒိုင်းနမစ်နှင့်အတူ။ တစ်ဦး 8K ခလုတ်ဖြစ်ခြင်းများအပြင်၌, ATEM နက္ခတ် 8K များအတွက်စံပြအဆင့်မြှင့်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို။
အဆိုပါ ATEM နက္ခတ် 8K မြင်ကွင်းစုံရှိပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
ဒါဟာ programming ကိုထုတ်လုပ်ရန်အမြန်ဆုံးလမ်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ကနေတဆင့်ဖြစ်ပြီး, ATEM နက္ခတ် 8K သာဖြစ်နိုင်ချေတစ်အဖြစ်မှန်စေသည်ပြောမ brainer ပါပဲ။ ကဖျော်ဖြေပွဲ, ဂီတပွဲတော်များ, နှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များမှာအသုံးပြုသောခံရဖို့အတှကျ ATEM နက္ခတ် 8K ရဲ့အများအပြားသွင်းအားစုခွင့်ပြုပါ။ သွင်းအားစုများနှင့်လေး DVEs ၏ဤကြီးမားသောငွေပမာဏပင် Multi-layer ကိုရေးစပ်သီ action ကိုဖုံးလွှမ်းရန်တည်ဆောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှိရာတိုက်ရိုက်အားကစားအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။
ATEM နက္ခတ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ HD နှင့် က Ultra HD ခလုတ်ဇာတိ 8K အတွက်အလုပ်လုပ်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီပေါင်းစပ်မှသာအသုံးပြုသူ 40 လွတ်လပ်သော 12G-SDI သွင်းအားစု၏တန်ခိုးပေးအပ် HD or က Ultra HD။ 8K မှ switched တောင်မှသည့်အခါဤ 40 သွင်းအားစုနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ 10 ကို Quad Link ကို 12G-SDI 8K သွင်းအားစုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအသုံးပြုသူ 720p, 1080p, 1080i ပြောင်းနိုင်ပါသည်ဆိုလိုတယ်, က Ultra HD တစ်ချက်ချင်းနှင့် 8K ဗီဒီယိုကစံချိန်စံညွှန်း။ အသုံးပြုသူလည်း4လွတ်လပ်သောခံနိုငျ က Ultra HD Full-resolution ကိုသို့ပြောင်းနိုင်စွမ်းနှင့်အတူမြင်ကွင်းစုံ 8K မြင်ကွင်းစုံ။ ပင် keyers, DVE, စူပါရင်းမြစ်နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း keyers ဇာတိ 8K ပြောင်းရန်နိုငျပါသညျ!
ATEM နက္ခတ်သို့ built 8K မြင်ကွင်းစုံရှိခြင်း 4K မှ switched အခါ, တစ်ဦးချင်း single full-resolution ကို 8K မြင်ကွင်းစုံသို့စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်သော 8 လွတ်လပ်သောမြင်ကွင်းစုံလက်ငင်းအတူမျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားလုံးပြင်ပသွင်းအားစုများနှင့်အားလုံးပြည်တွင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်မဆိုအမြင်မှရှုံးနိုင်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီသည်မြင်ကွင်းစုံလွတ်လပ်စွာ 4, 7, 10, 13 သို့မဟုတ် 16 တစ်ပြိုင်နက်အမြင်များဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှုမြင်တဲ့ထုံးစံတံဆိပ်, V ကိုမီတာနှင့်တာလီချိုးအပါအဝင် On-screen ကိုအဆင့်အတန်းရှိတယ်။ အဆိုပါလေး 12G-SDI မြင်ကွင်းစုံရလဒ်ထောက်ခံမှု HD နှင့် က Ultra HD 2160p60 မှတက်နှင့်ကို Quad Link ကို 4320G-SDI မှတဆင့် 60p12 မှတက် 8K မှ switched အခါ။
ATEM နက္ခတ် 8 K သည်အဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ပါဝါအားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
တစ်ဦး ATEM နက္ခတ် 8K ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 2RU ထိန်သိမ်းဒီဇိုင်းကို mount အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်ခလုတ်များ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ခွင့်ပြုနှင့်ပါဝင်သည်အသုံးပြုသူအစီအစဉ်ကို output ကိုမြင် On-screen ကို menus တွေကနေတဆင့်ခလုတ် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်ကြီးမားတဲ့ LCD ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးအကျယ် 40 12G-SDI သွင်းအားစု x အဆိုပါခလုတ်၏နောက်ဘက်, 24 တစ်ခုသာ 12RU ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း 422G-SDI aux ရလဒျအပေါင်းမျှမျှတတအသံ, Ethernet, သည် RS-2 ထိန်းချုပ်မှုနှင့် MADI ဒီဂျစ်တယ်အသံအတွင်းပိုင်း Fairlight အသံရောနှောဖို့အပိုသွင်းအားစု x ထားပါတယ် အရွယ်အစား။
ATEM နက္ခတ် 8K ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ကြာချိန်, နယ်စပ်အရောင်နယ်စပ်အကျယ်, အနေအထားနှင့်ဦးတည်ချက်အဖြစ် parameters တွေကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး 8K ဇာတိအသွင်ကူးပြောင်းမှုအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ အဆိုပါအသွင်းကူးပြောင်းရေးပါဝင်သည်:
အသွင်ကူးပြောင်းမှုဇာတိအပြည့်အဝ 8K ဖြစ်ကြပြီးအသုံးပြုသူတစ်ဦးလည်းပြည်တွင်းရေးမီဒီယာပလေယာနှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, ဂရပ်ဖစ် Wipe နှင့်ပင် Stinger အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် DVE အသွင်ကူးပြောင်းမှု, ခံယူနိုင်ပါတယ်။ အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ATEM နက္ခတ် 8K အသုံးပြုသူများကိုလေကြောင်းမှာသူတို့ကိုချပြီးရှေ့တော်၌ထိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုစစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးအပ်တဲ့ preview ကိုအကူးအပြောင်းအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်!
Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို ATEM နက္ခတ် 8K ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံထုတ်လုပ်မှုဗတ္တိဇံကိုပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ console ကိုဖော်စပ်နေတဲ့တရားမျှတအလင်းချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့ပင်စကားသံကိုကျော်အတှကျအသုံးပွုမိုက်ခရိုဖုန်း TalkBack Analog စသွင်းအားစုထဲကနေအသံရောထွေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
NAB ပြရန် New York ကမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအောက်တိုဘာလ 16-17, 2019 အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Blackmagic ဒီဇိုင်း ပြပွဲတဲမှာကျင်းပပါလိမ့်မည် N403.
အဘို့မှတ်ပုံတင်ရန် NAB ပြရန် နယူးယောက်, ပြီးတော့ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ATEM constellation 8kထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.blackmagicdesign.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 ATEM နက္ခတ် ATEM နက္ခတ် 8K Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း မြင်ကွင်းစုံ NAB NAB 2015 NAB 2016 Show ကိုနယူးယောက် NAB NAB16 nabshow 2019-09-30
ယခင်: Calrec သည် JT-NM Interop Test ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းပြီး True IP Interoperability ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
နောက်တစ်ခု: ပုဂ္ဂလိက Multi-Media ကိုစတူဒီယိုရှာဝင်ရောက်ပြီး